बढेको बढ्यै कोरोना संक्रमित, सबै सवारी पास रद्ध ! « Health Chautari
३० बैशाख २०७७, मंगलवार १७:१७
बढेको बढ्यै कोरोना संक्रमित, सबै सवारी पास रद्ध !
Published on : ३० बैशाख २०७७, मंगलवार १७:१७
काठमाडौं । लकडाउन खुकुलो हुँदै जाँदा संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढ्न थालेपछि अब सबै सवारी पास रद्ध गरिने भएको छ । यससँगै अब एक जिल्लाबाट अर्काे जिल्ला जान पाइदैन ।
आजै मात्र बिहान र साँझ गरी नेपालमा ७४ जना कोरोना संक्रमित थपिएपछि लकडाउन खुकुलो पार्दै गएको सरकारले आकस्मिक रुपमा यस्तो निर्णय गरेको हो । यसअघि कोरोना महामारी फैलिएपछि विश्वका अन्य देशहरुले पनि ‘इन्टरडिष्ट्रीक लक’ गरेका थिए । यो नीतिमा एक प्रदेश वा जिल्लाबाट अर्काे प्रदेश वा जिल्ला जान पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको हुन्छ ।
यसअघि नेपाल सरकारले अत्यावश्यक सवारी जस्तै एम्बुलेन्स, तरकारी, दुध,फलफूल लगायत प्रेस,दमकल, अस्पताल, चिकित्सक लगायतका सवारीलाई पासका आधारमा वा कुनै स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा सजिलै एक ठाँउबाट अर्काे जान दिएकोमा अब यो नियम पूर्ण रुपमा लागू भएको खण्डमा यस्ता पासमाथि पनि निगरानी बढाइ थप कडाइ गरिनेछ ।
यसअघि सरकारी कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग, निर्माण सेवालगायतसँग सम्बद्ध ४४ प्रकारका उद्योगहरु क्रमिक रुपमा सञ्चालन गर्ने भन्दै उच्चस्तरीय समितिले लकडाउन खुकुलो पार्ने नीति अघि सारेको थियो । तर संक्रमितको संख्या नपत्याउँदो तरिकाले बढ्न थालेपछि अब उप्रान्त कार्यालयको परिचय पत्र देखाएर हिँड्ने छुट हुँदैन ।
गृहमन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “पर्सि बिहीवारबाट यस्तो नियम लागू गर्न लागिएको हो ।” तर सरकारी कर्मचारीको हकमा भने एउटै जिल्लाको कुनै एक जिल्लाबाट अर्काे जिल्लामा जान पाउने तर अन्तरजिल्ला आवतजावत गर्न नपाइने बुझिएको छ ।
स्रोतका अनुसार आज बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउन खुकुलो पारेकोमा आपत्ती जनाउँदै लकडाउन कडा बनाउन निर्देशन दिएका थिए ।
छिमेकी मुलुक भारतमा यो समाचार पार्दासम्म ७१ हजार ४ सय ४१ जनामा संक्रमण फैलिएको छ भने २ हजार ३ सय १० जनाको कोरोनाको कारण ज्यान गएको छ । त्यस्तै बितेको २४ घण्टामा १६ जनाको ज्यान गएको छ ।
नेपाल र भारतको खुला सीमानाको कारण राती अवैध रुपमा लकडाउन उल्लंघन गर्दै नेपाल छिरेका केही व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कोरोनाको त्रास चुलिएको छ ।